खाली पेटमा यी खाने कुरा खाँ`दा घा` तक ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/खाली पेटमा यी खाने कुरा खाँ`दा घा` तक !
काठमाडौः कुनै पनि खाने`कुरा खानु पर्छ त्यस्ता खाने कुराले स्वा`स्थ्यमा पुर्‍याउने फाइदा र बेफा`इदाका बारेमा जानी रा`ख्न आव`श्यक छ । गल`त समयमा खाएको यस्ता खाने कुराले अल्स`र जस्ता जटिल समस्या समेत निम्त्या`उन सक्छ ।
आइरन तथा पोटा`सियमले भर`पूर केरा स्वा`स्थ्यका लागि निकै फाइदा जनक मानिन्छ । यसको सेवनले शरीरमा आ`इरनको कमी हुन पाउँदैन । तर खाली पेटमा केराको सेव`नले भने स्वास्थ्यमा प्रति`कुल असर पार्न सक्छ । त्यसैले विशे`षज्ञहरु खाली पेटमा केरा नखान सुझाव दिने गर्छन् ।
खासगरी, माइग्रेन तथा एसिडि`टीको समस्या भएका`हरुले त झन् खाली पेटमा केरा खानै नहुने उनीहरु बता`उँछन् । भन्छन्, खा`ली पेटमा केरा खाए`मा एसि`डिटी बढ्ने गर्छ । साथै, गलत स`मयमा खाएमा भने यसले रगत`मा हुने खनिज पदा`र्थको स्तरमा तल माथि हुन सक्छ ।